Home News Maxay Tahay Qorshaha u Dagan Kooxda Qiyano Qaran Marka ay Hubsadan In...
Maxay Tahay Qorshaha u Dagan Kooxda Qiyano Qaran Marka ay Hubsadan In Musharaxoda uu Ku Guleysto Kursiga Golaha Shacabka?
Dowlada Qiyaano Qaran oo qorsheyneysa marka ay hubsato Kursiga Golaha Shacabka in uu ku fadhiisto Musharaxooda Maxamed Mursal kaasi oo la donaayo in Liiska siyaasiyiin caan ah, shaqsiyaad hadda xasaanad leh iyo kuwo magac ku leh dalka, kuwaasi oo la doonayo in xabsiga lasoo dhigo.
Warqad sir ah oo an helnay ayaa lagu ogaaday in la xiri doono xubno badan oo siyaasiyiin ah, kuwaasi oo ay ka nasan weysay dowladda oo maalin iyo habeen la taagan dicaayado iyo faafinta warar ay dhibsatay dowladda.
Sidoo kale waxaa liiskan ku jira xildhibaanno caan ah, kuwaasi oo la doonayo in iyagana xabsiga lasoo dhigo, waxaana marka hore laga qaadi doonaa xasaanadda.
Guddoomiyaha golaha shacabka loo dooran doono waa shaqsiga kaliya ee ay ku xiran tahay in la xiro xildhibaanno, waayo wuxuu sahli doonaa xasaanad ka qaadistooda, waana shaqsi dhanka DFS ka imaanaya.
Waxaa macquul ah in waxyaabaha la xirayo ay galaan shaqsiyaad iyagana baraha bulshada ka weerara dowladda Kheyre iyo Farmajo Sido kale qaar ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan oo la donayo in lagu baahiyo Nidaamka dacaayad u fidinta Dowlada hadi ay diidana Xabsiga la dhigo.